Manampy Ny Tsy Manan-Kialofana Ao Maosko · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 19:53 GMT
Nahita kisendrasendra (teo amin'ny aterineto) vondrona tsara sitrapo mamahana ny tsy manan-kialofana ao amin'ny fiandrasana fiarandalamby sy metro ao Maosko ny mpampiasa LJ beth4ever, ary nanapaka hevitra ny hanatevina ny laharan'izy ireo. Ito ny fitantaràny, izay navoaka ihany koa tao amin'ny vondrom-piarahamonina LJ ru_homeless :
MOMBA ny tsy manan-kialofana.
Nahita an'ito rohy ito aho ary nandray anjara tamin'ny hetsika iray tamin'ny Talata farany teo. Ahoana ny fandehany tao? Tonga tao amin'ny Chistye Prudy, nahita ilay tranobe ary ny efitrano. Nisy olona folo teo ho eo. Efa vonona ny ankamaroan'ny sakafo: akondro, ronono ao anaty baoritra kely (miaraka amin'ny fitrohana azy), mofomamy anaty fonosana. Avy eo tonga i Vika ary nitondra ny mofony, kaokaombira, aneta (karazana tongoloravina) ary saosisy. Notetehanay aingana daholo izy rehetra ary nataonay anaty mofo. Nofonosinay tao anaty fonosana samihafa daholo ny mofo rehetra. Avy eo nisaraka anaty vondrona vitsivitsy izahay. Olona telo isaky ny vondrona. Nisy lehilahy tanora roa ary vehivavy iray ny vondrona izay nandeha namahana an'ireo olona eny amin'ny fiandrasana fiarandalamby, ary vehivavy ihany no tao amin'ny vondrona roa hafa, (izay nandeha teny amin'ny metro). Ekeko fa tsy azo antoka noho ny any amin'ny fiandrasana fiarandalamby ny any.
Ora iray no nanaovana azy. Tsy dia nisy olona nandeha tao amin'ny manodidina [miaraka ny any amin'ny metro]. Chistye Prudy, Lubyanka, Taganka, Chistye Prudy no làlanay (raha tsy diso aho). Araky ny nohazavain'i Vika tamiko, mifankahita amin'ny olona 9 na 10 eo ry izareo ao anatin'ny adin'ny ray. Tsy vaovao amin'izy ireo ny ankamaroany, fa indraindray misy ihany ireo tarehy vaovao sy olona avy amin'ny làlana hafa. Nampidirina ao anaty boky manokana ny anaran'ireo rehetra hitanay ho an'ny famantarana bebe kokoa.
Tsy nalehanay teny amin'ireo, na mitovy amin'ny mpangataka aza izy ireo, mivarotra zavatra. Izao ny antony. Raha misy olona miezaka ny mitady vola, mety ho tezitra izy raha atao tahaky ny mpangataka. Ary [tsy nandeha] teny amin'ireo [mpangataka] izay mifindrafindra mitety fiara izahay. Sanatria ve izahay handeha hanenjika azy ireo miaraka amin'ireo mofo voasesika ? Mba misy heviny ihany.
Fa tamin'ny Talata tsy dia betsaka ny olona, noho ny antony tsy fantatra: olona dimy monja no hitanay.
Voalohany, nisy ramotoa efa nahazoazo taona ihany, mpampianatra taloha tany an-tsekoly ho an'ny marenina, raha tsy diso aho. Ao tsara ny fitadidiany ary amin'ny ankapobeny misy heviny ny resany. Miaina ao anaty kommunalka (trano iombonana) izy. Araka ny teniny, indraindray mandalo eo ireo mpiaramiasa taminy fahiny (eo akaiky eo ny Ministeran'ny Fanabeazana) ary mody tsy mahalala azy. Indray andro, noravan'ireo mpiaramonina [trano] taminy ny efitra nametrahany ny boky taloha ho an'ny ankizy, miaraka amin'ny sary, sns… Narian'izy ireo daholo. Ary loza mahatsiravina ho azy ilay izy.
Dia nisy indray vaviantitr iray hafa. Mpivavaka. Tsy naka na inona na inona afa-tsy akondro izy satria mifady hanina. Na ny mofomamy aza toa tsy atokisany, ny ao anatiny. Nasehony ireo bàn-kirarony vaovao; telo mandeha tsiroaroa ho an'ny 40 robla ($1.50). Nitantara vaovaom-piangonana taminay izy. Nolazainy fa efa nahangona ny vola ilaina ho an'ny fandevenana azy izy. Ary efa nanomboka nanangona ho amin-javatra hafa, saingy tsiambaratelo ny amin'izy. Araky ny fahazoanay azy, ho an'ny zavatra ao amin'ny fiangonany. Mpivavaka be izy ary nivadika mpangataka noho ny filainy avy ao anatiny. Afaka niantohan'ny zanany vavy sy ny vinantolahiny anefa izy.
Avy eo izahay nahita rangahy niaraka amin'ny tehina. Tahaky ny voadidy efa ela be tany aloha tany ny tarehiny. Niteny izy fa handeha afaka adin'ny iray satria mora reraka ny tongony.
Mpivady ireo no nifanena tamnay farany: Queen Elena sy Mikhail. Olona mahafinaritra. Fa masiso fotsiny. Elena – vehivavy diso matavy loatra, mavitrika. Mamorona tantara samihafa izy. Nanambara fa hitany niaraka tamin'ny vazaha ary niteny Italianina izaho. Tahaky ny manampahaizana mandalo fotoan-tsarotra i Mikhail. Palitao mihidy in-droa. Mamaky gazety, mahafantatra vaovao. Raha ny marina, toy ireny mpisoloky fahiny ireny lery.
Avy eo niverina izahay. Nanana vintana kokoa ny vondrona hafa – nahita olona be dia be ry zareo. Tsara izao ny mikarakara zavatra mitovy amin'izao any Preobrazhenka, angamba. Fa ny tsy manan-kialofanay (1) mamarotra karazan-javatra be dia be, ary (2) miaraka mivenjivenjy amin'ireo vondrona ngezangeza, mampahatahotra ny manatona an-dry zareo.
Faly nahita anay daholo ny olona rehetra, indrindra fa i Vika. Tadidin'izy ireo ny fanaon'ny tsirairay, liana momba ny fiainan'ireo mpikamban'ny hetsika.
Tsy ny mamahana olona no tena tanjan'itony dia itony, na ilaina aza izy ireo. Ary raha angatahan'ny olona ny hahazo azy ireny [fanafody amidy eny rehetra eny] na zavatra hafa, afaka ataon'ny mpikamban'ny hetsika izany. Fa ny miresaka, mampiseho fahalinana, ary manampy no tena tanjona.
Mety hiverina any indray aho, tsy sarotra ilay izy ary tsy mampahatahotra.
Fanajana betsaka ho an'ireo mirotsaka an-tsehatra tsy tapaka. Sosokevitro ihany koa ny vondrom-piarahamonina ru_homeless [LJ].